यी पाँच चिज राख्नुस् तपाईको घरमा ! छुट्ने छैन लक्ष्मीको वास, हेर्नुहोस हुनेछन यस्ता चमत्कारिक लाभ ! | Taja Khoj Khabar
Posted by Taja Khoj Khabar On February 09, 20190Comment
गाईको घ्यूको दियो हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार गाईलाई लक्ष्मीको रुप मान्ने गरिन्छ भने गाईको घ्यूलाई अत्याधिक शुद्ध मान्ने गरिन्छ। यदि तुलसीको मोठमा गाईको घ्यूमा दियो बल्नु भएमा लक्ष्मी प्रसन्न हुने धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईले सेतो धातु वा माटोको दियो प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। साँझको पुजा गर्दा गाईको घ्यू प्रयोग गर्ने गर्नु होला। शंख पौराणिक विश्वासको अनुसार, शंखलाई लक्ष्मीको भाइ मान्ने गरिन्छ। जहाँ शंख रहने गर्छ त्यहाँ लक्ष्मीको वास रहने गर्छ भने धार्मिक विश्वास रही आएको छ। शंख धेरै प्रकारको पाइने गरे पनि दक्षिणावर्ती शंख अत्याधिक शुभ मान्ने गरिन्छ। पुञ्ज स्थलमा सेतो शंख स्थापित गर्नु भएमा घरमा लक्ष्मीको वास रही रहने छ।
स्फटिकको माला ज्योतिष शास्त्रमा स्फटिकको मालालाई शुक्र ग्रहसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। शुक्र ग्रह धन-वैभव अनि विलासिताको कारक ग्रह रहने भएका कारण स्फटिक घरमा राख्नु धेरै शुभ मान्ने गरिन्छ। स्फटिकको माला घरमा राख्नाले घरको सम्पत्ति घटेर नजाने हुन्छ। गुलाब धार्मिक विश्वास अनुसारको गुलाबको फूल र गुलाबको सुगन्ध लक्ष्मीका दुवै प्रिय रहने गर्छन्। हरेक दिन लक्ष्मीलाई गुलाब पेश गर्दा व्यवसायिक पदोन्नति रहने हुन्छ। देवी लक्ष्मीलाई गुलाबका पातहरूले अभिषेक गर्दा ऋण घटेर जाने हुन्छ। हरेक शुक्रबार,लक्ष्मीलाई गुलाबको मल चढाउँदा घरको दरिद्रता हटेर जाने हुन्छ।
भगवान विष्णु बिना विष्णु लक्ष्मीको अनुग्रह कहिले पनि नमिल्ने कुरा धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ। त्यस कारण आरधना गर्ने स्थलमा लक्ष्मीको सँगै विष्णुको मूर्ति राख्नु पर्ने हुन्छ। साथै दिनहु दुबैको आराधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा परिवारका मुख्य व्यक्तिको कमाइ बढ्ने गर्छ भने हरेक परिवारका सदस्यलाई आर्थिक शुख मिल्ने गर्छ। अन्य समाचार,डा.मिना झा भन्नुहुन्छ महिलाकोमासुपलाउदै मा पाठेघर नै काटेर फाल्नु पर्दैन, यसरी सजिलै सँग सामाधान गर्न सकिन्छ ?तपाइ पनि एक शेयर गर्नुहोस ! बनेपाकी ३० वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) लगातार रक्तश्राव भएपछि चिकित्सककहाँ पुगिन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘पाठेघरमा मासु पलाएको छ, तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ एक सन्तानकी आमा शर्मिला चिकित्सकको कुरा सुनेर आत्तिइन्। उनले औषधि खाएर निको हुन्छ कि ? भनेर सोधिन् पनि। तर, चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले पाठेघरै फाल्नुपर्ने दोहो¥याए।
दोस्रो सन्तानको योजनामा रहेका शर्मिला र उनका पतिका लागि सुखद् समाचार थिएन यो । उनको उमेर पनि त ३० वर्ष मात्रै थियो। चिकित्सकले अप्रेशनबाहेक अर्को उपाय नभएको बताएपछि उनीहरुले अप्रेशनका लागि मिति समेत लिए। अपे्रेशनको मिति जति नजिक आयो, चिन्तापनि थपिंदै गयो। पहिलो मिति बहाना बनाएर टारे। अस्पतालले अर्को मिति दियो । अस्पतालले पटक–पटक फोन गरेर अपे्रशनका लागि बोलाइरह्यो । तर, मनले नमानेपछि उनीहरुले अन्य ३÷४ जना काठमाडौंका नाम चलेका स्त्री रोग विशेषज्ञसँग जाँच गराए। शर्मिलाले भनिन्, ‘अधिकांश चिकित्सकले औषधि खाएर निको हुन्छ भनेपछि मेरो मन ढुक्क भयो। नत्र मलाई राति निद्रा नपर्ने, चिन्ता लागिरहने समस्या भयो। झण्डै डिप्रेशन भएको।’ शर्मिला मात्र होइन, रुपन्देहीबाट आएकी राधा भण्डारीलाई पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। उपचारका लागि प्राइभेट अस्पतालमा पुगेकी उनलाई चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले तुरुन्तै फाल्नुपर्छ भने । उनले अन्य चिकित्सकसँग पनि परामर्श गरी औषधि खाइरहेको बताइन्। ‘आजकल त के भएको, एउटै चिकित्सकलाई देखाएर त विश्वासै नलाग्ने, चिकित्सकपिच्छे फरक कुरा आउँछ, कसको कुरा ठीक हो पत्याउनै गाह्रो।’
पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ? पाठेघरमा मासु पलाउनुको कारण यही नै हो भन्ने छैन। वंशाणुगत कारणले पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा थाहा नै हुँदैन। अन्य समस्या लिएर अस्पताल आएका महिलालाई समस्याका आधारमा जाँच गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ पाठेघरमा मासु पलाएको रहेछ भनेर। पाठेघरमा मासु पलाएको कसरी थाहा पाउने, यसका लक्षण के–के हुन् ? पाठेघरमा मासु पलाएको शंका गर्ने प्रमुख कारण महिनावारी हुँदा धेरै रगत जानु, अत्याधिक पेट दुख्नु हो । महिनावारी हुँदा सामान्यतः५÷६ दिनमा श्राव बन्द हुनुपर्छ । तर, यस्तो समस्या भएका महिलालाई धेरै दिनसम्म रक्तश्राव भइरहन्छ । बीचमा रोकिएर फेरि श्राव हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।पेट अत्यधिक दुख्ने तथा रगत धेरै बग्दा त्यसले अन्य समस्या पनि ल्याउँछ । शरीरमा रगतको कमी भएर एनिमिया हुने, सेतो पानी बग्ने, कमजोरी हुने, थकाई लाग्ने, रिगंटा लाग्ने, कतिपयलाई सन्तान नहुने, गर्भ रहे पनि तुहिने समस्या हुन्छ । हामीकहाँ महिलाहरु धेरै रगत बग्यो, महिनावारी हुँवा वा अन्य समयमा पनि अत्यधिक पेट दुख्यो, सन्तान भएन, गर्भ रहन्छ तर खेर गइरह्यो भन्ने जस्ता समस्या लिएर आउँछन् । उनीहरुलाई जाँच गरेपछि पाठेघरमा मासु पलाएको थाहा हुन्छ । हामीले उनीहरुसँग सोधपुछ गरी र अल्ट्रासाउण्ड गरेर निश्चित गर्छौं।
हामीले कम उमेर भएका,सन्तानको रहर नपुगेका, औषधि गरेर निको हुने अवस्थाका महिलाको पाठेघर सकेसम्म फाल्दैनौं। कति महिलाहरु आफैं पनि पाठेघर झिकिदिनुस् ढुक्क हुन्छ भन्छन्। तर, उनीहरुलाई औषधिले निको हुने अवस्था भएसम्म पाठेघर झिक्नुहुन्न भनेर सम्झाउने काम चिकित्सक हो। आजकल धेरै निजी अस्पतालमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या हुनासाथ झिक्नुपर्छ भन्ने गलत अभ्यास भएको छ। झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पाठेघर झिक्नुहुन्न। फालिसकेपछि त्यसले अझ धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ। सन्तान पूरा भएका, उमेर पुगेका, शल्यक्रियाबाहेक अन्य उपाय नभएका महिलाको हकमा भने मात्र फाल्नैपर्ने अवस्था हुन्छ। एकपटक मासु फालेपछि फेरि पलाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत बिरामीमा फेरि पलाउने सम्भावना हुन्छ । किनकि प्रजनन् क्षमता भएकामहिनावारी हुने महिलामा पलाइरहन्छ। परिवारका अघिका महिलामा थियो भने पछिका महिलालाई पनि हुन्छ।हामीले एक ठाउँमा पलाएको मासु पो फाल्छौं, फेरि अन्य ठाउँमा आउन सक्छ । दोहोरिन थाल्यो, परिवार पूरा भएको छ, रक्तश्राव रोकिएन, उमेर पुगेको छ भने पाठेघर फाल्नुस् भनेर सल्लाह दिन्छौं।
पाठेघर फाल्दा पछि पनि समस्या देखिन्छ भन्नुभयो, कस्ता समस्या देखिन्छन् ? झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक शरीरको कुनैपनि अंङ्ग झिक्नु राम्रो होइन । पाठेघरको कुरा पनि त्यही हो। एक त सानै उमेरमा पाठेघर फाल्दा बच्चा नभएकालाई बच्चा हुँदैन, अब भन्नुस्, ३४÷३५ वर्षको महिलाको पाठेघर फाल्नु राम्रो हो त ? बाध्यताबाहेक उसको त पूरै बाँकी जिन्दगी बाँच्नु छ, समस्या हुन्छ नि। फालेपछि पनि चिट्चिट्पन हुने, झिंजो लाग्ने, कम्मर दुख्ने,ब्याकपेन हुने, धेरैलाई निद्रा नपर्ने समस्या हुन्छ । हातखुट्टा गल्ने, धेरै काम गर्न नसक्ने समस्या पनि देखिन्छन्। पाठेघरमा मासु पलाउँदा उपचार गरिएन भनेकस्तो समस्या निम्तिन्छ? एकदम कम महिला .२देखि .५ प्रतिशत महिलामा क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ । सन्तान नभएकालाई सन्तान हुँदैन। पाठेघरमा मासु तीन प्रकारको हुन्छ। पाठेघरको बाहिरी भागमा जसलाई चिकित्सकीय भाषामा सब्ह्रसिरस भनिन्छ । यो समस्या भएमा पेट अत्यधिक दुख्छ । यो बेला उपचार गराइहाल्नुपर्छ।
Previous: यस कारण यी ३ समयमा कहिल्यै पनि नसुत्नुस ! जानकारीको लागि शेयर गरि जान्नुहोस !
Next: महिलाले झुक्किएर नि गर्नै नहुने यी ९ काम, यस्तो छ कारण !
भाग्य मानिले मात्र देख्ने यो नाग देवता को महिमा देख्ने बित्तिकै फोटो मा छोएर ॐ लेखी गर्नुहोस् दर्शन तपाईको मन मा सान्ती मिल्नेछ ॐ
के तपाई लाई थाहाछ ? यि वस्तु घरमा राख्दा चम्कन्छ भाग्य राख्ननुहोस यस्ता भाग्य चम्काउने मांगलिक वस्तुहरु चम्कन्छ तपाईको भाग्य